Inkcazo kunye neMimiselo ye-Disjuncts kwisiGrike soLwimi
Ngegrama yesiNgesi , i- disjunct yintlobo yesibhengezo sesigwebo esichaza umxholo okanye indlela yento eshiwo okanye ebhaliweyo. Faka enye indlela, i-disjunct igama okanye ibinzana ebonisa ngokucacileyo isimo sesithethi okanye umbhali. Kwakhona kuthiwa isivakalisi esichaziweyo okanye isiguqulelo somhlathi .
Ngokungafani nezilungiso , ezidibeneyo kwisakhiwo sesigwebo okanye isigatya , ukudibanisa ukuma ngaphandle kwesakhiwo sombhalo esicatshulwayo.
Ngokwenene, utsho uDavid Crystal, udibanisa "jonga phantsi ngaphantsi kwisigatshana, wenze isigwebo malunga nento esithethayo okanye indlela echazwa ngayo" ( Ukwenza iSense yegrama , 2004).
Njengoko kuchazwe ngezantsi, iindidi ezimbini ezisisiseko ze-disjuncts zanelisekile i- disjuncts (eyaziwa ngokuba yi- disjuncts ) kunye nesitayela esidibanisayo .
Ngamanye amaxesha i- disjunct isetyenziswe nakweyiphi na yezinto ezimbini okanye ngaphezulu ezidibaniswe ngumbambano wokudibanisa okanye .
Ukususela kwisiLatini, "ukwahlukana"
" Ngaphandle kokungathandabuzeki , enye yezona ziboniso zivelele kwaye zithintekayo kumabonwakude avela kuma-1960s yinkqutyana ye- Star Trek yokuqala, eyenziwe nguGene Roddenberry."
(UKenneth Bachor, "Izinto Ezinhlanu Ekunokwenzeka Ukuba Wazi Ngayo Inkwenkwezi Yasekuqaleni." Ixesha, Septemba 8, 2016)
" Ngokumangalisayo , banengqondo yokulima umhlaba, kwaye uthando lwezinto eziphathekayo luyisifo kubo."
(Ukuhlala eBull, Speech River, Speech 1875)
"Njengoko sixoxile, ulwazi olusisile ngalo luya kuthi, siya kuthi, uncinci , ukuba urhulumente wam unomuva nje ukuba udlala."
(UJeffrey S. Stephens, iinjongo zeNthuba , ngo-2006)
" Kodwa ngokudabukisayo , enye yeengxaki ekubekwe kwidisakazo yoluntu kukuba abantu bathambekele ukucinga ukuba unyanisekileyo yonke ixesha."
(Ira Glass, ecatshulwe nguAna Marie Cox noJoanna Dionis kuMama Jones , ngoSeptemba-Oktobha, 1998)
Ngokudabukisayo , le ncwadi ayisaprintwa, kodwa iikopi zingatholakala kwiilayibrari kunye neencwadi zokugcina iincwadi.
"'Ewe, unokulala?' U-Count wacela ngobusuku obulandelayo ekufikeni kwakhe emgodini.
"' Ngokunyanisekileyo , hayi,' uWestley waphendula ngelizwi lakhe eliqhelekileyo."
(UWilliam Goldman, uMthethelikazi , 1973)
" Ngethemba , le ncwadi iya kubakhuthaza abafundi ukuba banomdla omkhulu kwimozulu, isayensi yesimo sezulu kunye nesayensi yesayensi ngokubanzi."
(Keay Davidson, Twister .
Ngethemba - kunye nezinye iingxelo ezidibanisayo
- "Ixesha lokuvuma ukuba ithemba liye lajoyina le nqanaba lamagama angethulo ( njengenhlanhla, ngokunyanisekileyo, ngokunyanisekileyo, ngokunyanisekileyo, ngokudabukisayo, ngokunyanisekileyo , kunye nabanye) esingazisebenzisi ukuchaza isenzi, zeziphi izivakalisi eziqhelekileyo, kodwa Chaza isimo sethu sengqondo malunga nesitatimende esilandelayo ... Kodwa qaphela ukuba abanye abathinteli banokuthatha ingcamango encinci yethemba . Ngaba baya kujoyina isihlwele?
(Patricia T. O'Conner, Namaye: I-Grammarphobe's Guide to Improve English in Plain English , i-eReadhead Books, 2003)
- "Kwangaphambi kwexesha eliphambene nento yokuphikisana yethemba lokuba ifikeleleke, kwakunokwenzeka ukutshintshela amagama afana 'ngokuvuya,' 'ngethamsanqa,' 'ngobuqili,' 'ngobuqili,' ngokuzibandakanya, njengendlela izalathisi okanye ezidibanisayo : 'Wachitha yonke yakhe 'Ngomntu oyisiphukuphuku, wachitha yonke imali yakhe'; 'Wafika ngethamsanqa kwintsiba yefestile' okanye 'Wawela kwindawo yentsha, ngenhlanhla'; asiyikucima yonke imifanekiso. Yonke isandi ngokuthi 'sinethemba,' konke ukuziphatha kunye nokuphelisa, ukungahoyi ukuba iprojekthi yokusetyenziswa sele isele ikhona, kwaye igama elizondayo lithatha nje indawo ekhoyo. Enye yazo 'iyadabukisayo,' ngoku isetyenziswe njengengcaciso ephikisana nencazelo ethi 'Kuzozisola ukuba ...' ('Ngokudabukisayo, asikwazi ukukhonza ekuseni itiye') Ukusetyenziswa oku kunokugxekwa ngenxa yokuba sele sineenkcazo ezicacileyo ngokucacileyo 'ngokudabukisayo,' kwaye akukho sikho isizathu sokunyanzela umkhohlisi enkonzweni. Abasebenzisi, nangona kunjalo, banenkani inokuthi bangenakuthethelelwa koothixo abanesizathu esihle. "
(Walter Nash, Ulwimi olungavamile: Ukusetyenziswa kunye nezibonelelo zeNgesi . URoutledge, 1992)
Isitayela seDisjuncts kunye neNgcaciso yokuQinisekisa
"Kukho iintlobo ezimbini ze- disjuncts : isitayela esidibanisayo kunye nomxholo odibanisayo . Isitayela esichasayo sichaza izivakalisi ngesitayela okanye indlela abazithethayo: ngokunyanisekileyo nje ngo- Frankly, awunalo ithuba lokuwina (= Ndiyanitshela ngoku ); ngokwabo ngokoMntu, andizange ndibenze nantoni na ; ngokuhlonela, akukho nto kuwe ukuba wenze isigqibo : ukuba ndiyakuthi njalo , Kunokobuqhetseba, ukuba ndingatsho njalo ; Wandixelela ngoko ukuba akayi kuba khona, kuba wanditsho njalo (= ndiyazi ukuba ngenxa yoko undixelele njalo). Ukuqukethwe kudibanisa izimvo malunga nomxholo wento ekuthethwa ngayo. kwinto ekuthethwa ngayo: mhlawumbi mhlawumbi unokunceda , ngokungathandabuzekiyo ngokungathandabuzekiyo , uyinqobile ; kusobala ukuba ngokucacileyo , akanasifiso sokusinceda . "
(Sidney Greenbaum, "I-Adverbial." I-Oxford Companion kwiLwimi lweNgesi , u-Tom McArthur, i-Oxford University Press, ngo-1992)
5 Izihloko kwiMisebenzi kaJohn Ruskin
Ukuvumelanisa nokuHlola ngesiNgesi
I-Top 10 Foo Fighters Iingoma
Isingeniso kwi-CRISPR yeGenesome Editing